OMN: GRD – Duguuggaa sanyii dhokataa – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOMN: GRD – Duguuggaa sanyii dhokataa
ጥብቅ መረጃ፦ ከፓትርያርኩ መታፈን ጀርባ ያለው ማን ነው?፣ ቤተ-መንግሥቱ ወይስ ቤተ-ክህነቱ| ETHIO FORUM
Ummata hangana gahu kan Sagantaa Afxiraaf qophaa’eef jacha gara Adda babbaayii Masqalaatti wal ga’uuf jadhu sodaa qeensota habashaaf jacha bulchinsi Magaalaa Finfinnee fi Abiyyiin dhoorkamuun baay’ee nama gaddisiisa
Amma Sirnni Abiyyi ijaaraa jiru kan eenyuu akka taate hundi namaa hubachuu qaba! Kana argitaniimii
waan waywaachaa turreef ammoo ganaa arguu teessu
biyyi kun kan ummata hundaati biyya gartuu tokko qofaaf biyya taatu
Biyya Amantaa tokko qofa ol qabde kaan gadi qabdu arguu hin barbaannu
ummatni mirga isaa amumma irraa jalqabee akka guutuu biyyaattu gaafachuu qaba
Suuraa kun eerga guddaa qaba.
Masjida Filow jiru salaatani yeroo gadii ba’aan akka isaan dirree Masqalaa hin demneef akkasitti poolisoonni daandii cufaanii turan.
Six months on: 5,000 children in Tigray remain separated from their parents after fleeing violence in Ethiopia.
UNICEF chief Henrietta Fore describes the heartbreaking crisis and what we can do to help.
Humna Addaa fi Poolisii Oromiyaaf
Mootummaa dhufaa lufaan, obboleewwan keessan maaf lafarraa duguugdan?
Milishaa Amaaraatu Oromiyaa isiniif bulchaa? Aangotti fayyadamuu dhabuun yakka ta’uu hin barree?
Oromiyaa guututti, Walloo fi Wallaggatti milishaa Amaaraa fi Eertiraa bobbaasaa hanga Ummata nagaa lafarraa fixan, isin maal gootan? kan isaan irraa hafe Hayyoota mataa dhayaa obboloota keessan maaf dhiiga jigsitan? Gaaf yeroon kun dabre booddee Eessa deemtan? Mootummaanis ni kufa.
Milishaan Amaaraa fi kan Eertiraallee ni kufa.
Leenjiin isin leenjitan, irbuun isin galtan korojoo gandoota keessa deemtanii eeguudha?
Maaf hidhaa baaftanii ajjeeftanii bineensa nyaachiftan? Akkuma RIB fi Poolisii Federaalaa sanillee waraqaa gulantaa sobaa sanas isiniif hin kennan. Akkuma milishaa Amaaraallee Finfinneetti lafa isiniif hin kennan.
Yoom guyyaan akka saba ofiitti isin nu ammattanii, nuti isin ammannee, wajjiin ayyaana kabajaa, cooma muraa, bookaa dhugaa, qananii fi kabajni isin Ummata keessaniif agarsiiftan yoomi?
Akka yeroo Lammaa Magarsaa biyya bulchaa ture sanitti yeroon nuti mataa ol qabannuu fi ofitti boonnu sun ni dhufa. Abdiin eeggachaa jirra.
Akka #Musxafaa_Huseen ta’i!
Obboleewwan kee bosonaa si yaamaa jirti. Magaalaa hunda keessa jirti. Itti makamii seenaa dalagi.
Ummata kee cinaa dhaabbadhu.
Mootummaa ce’uumsaa ijaaruuf tumsa sirraa eeggamu bahi!
Hidhaa fi ajjeechaan haa dhaabbatu!
Akkasitti daandii gubbaa irratti dhorkamanii jiru Uummatni Muslimaa akka dirree Masqalaa hin seenneef